IMetro yenza okuhlukile ukusiza abaculi | IOL Isolezwe
IMetro yenza okuhlukile ukusiza abaculi
Isolezwe / 2 May 2012, 1:37pm / SIZWE BLOSE
U-DJ wodumo lwe-house uDJ Oskido owenza okuhlukile kuMetro FM.	Isithombe: Paballo Thekiso
NGIHLEZI ngizibuza ukuthi ngonjani umculo odlala emsakazweni kumbe kumele wenze njani ukuze kudlalwe umculo wakho.
NgoMgqibelo odlule ngike ngalalela uhlelo luka-Oscar Mdlongwa odume ngo-Oskido olubizwa nge-I Believe, kuMetro FM. Angisho kucace ukuthi angiyena umlandeli ka-Oskido emsakazweni ngimkhonze kakhulu uma eklwebha amapuleti.
Lolu hlelo selunesigaba lapho belanda khona umphathi womculo kulo msakazo azocacisela abalaleli ngezingoma ezidlalwa kulo msakazo, uphinde acacise ngento eyenza ezinye izingoma zingaphumeleli kumbe zigcine zingadlalwanga.
Phambilini kuthiwa kunabaculi ababedlalwa emsakazweni ngoba nakhu bekhokhile noma begwazile, okusho khona ukuthi babesuke bekhokhele lowo osuke ephethe uphiko lomculo.
Isimo asisafani njengoba manje kuyaye kuthiwe kunamakomiti alawula umculo kodwa okungaziwa ukuthi isekhona yini lento ebizwa nge-payola emsakazweni.
Ngicabanga ukuthi yinhle kakhulu into eyenziwa ngu-Oskido noDJ Nutty ophethe uphiko lomculo kulo msakazo.
IMetro FM ayiphoqelekile ukuthi ichazele abantu ngomculo okumele nokungamele udlalwe kodwa labo DJ ngokubona isidingo bayakwenza lokhu.
Kuhle lokhu ngoba ungathola umculi esehlukumezekile, engasafuni nokulalela umsakazo ngoba ecikwa wukuthi umculo wakhe awudlalwa kulowo msakazo kanti cha naye kunemigomo angayilandelile.
Isibonelo uNutty uthathe iculo likaDJ Zinhle walidlala wabe esethi leli culo licishe langaphumelela ukungena ohlwini lwezingoma ngoba lingahlelekile kahle.
Ukhale ngokuthi ubumnandi balo butholakala kakhulu ngasekugcineni, futhi kuba nesikhala eside lingasho lutho okuholela ekutheni abantu baze basuke kwi-dance floor bazitshele ukuthi liyabhora kanti cha limnandi, wukuthi nje alihleliwe ngendlela.
UNutty uphinde waveza ukuthi iMetro FM ayinanki-nga ngodaba lolimi, iculo lingaba nesiZulu, Xhosa, Sotho noma isiShangane uma limnandi bazolidlala.
Uxwayise oprojusa ngokuthi uma benza izingoma benze isiqiniseko sokuthi kuba khona lapho okuculwa khona ukuze ingoma idlalwe noma ngabe kunini kulo msakazo.
Uthe uma kungukuthi akukho lapho okuculwa khona ingoma kuyaphoqeleka ukuthi bayifake ngezimpelasonto kuphela.
Baningi abantu abasizakalayo ngalesi sigaba esikulolu hlelo, kwazise noprojusa bazothi bengena estudiyo babe bekwazi okudingwa yimisakazo.
Okubuhlungu ukuthi kasazi noma yonke imisakazo yenza njengeMetro FM yini kumbe nayo inokuthize ekholelwa kukho.